izicupho Artificial eside esesikhundleni namandla embonini yezokudoba, relegating wesibili lolo organic kanye lolo. Yiqiniso, ukukhuluma ngezinzuzo ngokuphelele lolo ezinjalo akudingekile kunemifuziselo yemvelo, kodwa ezimweni ezithile azowaphilisa la catch enkulu. Enye yalezi zindawo kuthatha JIG. Lena kulula ukuyisebenzisa futhi ngempumelelo ekubambeni lolo ukuthi odingeka nabadobi okhuthele futhi Wabasaqalayo. Nokho, cabangela-ke njengoba ngazozonke izindlela for ukudoba kuzo zonke izimo akudingekile. Kulesi hlobo hlelo lokusebenza likwazi izici zayo siqu okumelwe icatshangelwe. Kodwa ukuqala kungukuqonda ngaphezulu ukuze kuyinto JIG.
ulwazi olujwayelekile mayelana mormyshke
Kunzima ukunikeza incazelo eqondile JIG, njengoba umkhuba yayo esebenzisa inkulumo ethi ngokuphindaphindiwe kulekelelwa futhi lanwetshwa eminyakeni. Ngaphezu kwalokho, ngokuvamile abonisa uhlobo igiya noma hook okungukuthi sibi. Esikhathini zakudala umqondo JIG - a Sinker encane, ngixhumane emzimbeni okuyinto linamathele. Umsuka igama lihlotshaniswa Gammarus - zama-crustacean ukuthi aphinde abhukude abuyele emaceleni. Kuyinto lokhu amphipod umphumela futhi sidala Sinker ngengwegwe. Naphezu owandile onganembile wokuthi kudinga gear olukhethekile, lena akuyona ngempela kuyiqiniso ngenxa JIG. Liyanezela ebhodini, kivkovuyu kanye iflothi induku, kuzo zonke izimo, ukuhlinzeka yalokho okuhle. Nokho, njengoba kunjalo nezinye izicupho, JIG izinhlanzi umsebenzi ebonwe izimo ezithile okumelwe icatshangelwe. Ngokwesibonelo, isikhathi sonyaka kungcono ukubamba ehlobo nasebusika.
Izinto ngoba mormyshkas
Ngokuvamile, JIG senziwa metal. Ikakhulukazi, ukusetshenziswa kwe-lead, steel, ithini tungsten steel ahlukahlukene. Into esemqoka ukuthi ehlukanisa "isenzo" lezi zinsimbi enqubeni yokudoba, kungcono Usayizi, isisindo kanye nekhono "ukudlala" emanzini. Ngokwesibonelo, i-tungsten echibini onobuhle ngesilinganiso ngokushesha kunokuba phambili futhi ithini analogue nensimbi, ngenxa Ukukhalipha ethize, ongaboni okuheha izinhlanzi. Ungakhohlwa ukuthi JIG - kuba uhlobo Simulator isisulu nomzingeli ngakho umphumela Luhambo kubaluleke kakhulu. Ukuze wandise ke, abakhiqizi zihlanganisa imvume wezimpahla izinto zokuhloba - isibonelo, wenza zegolide nezesiliva ifaka kanye imiqhele. Libuye ukusetshenziswa ezivamile luminescent izinto, ukudala i kukhanya engavamile. Akufanele sicabange ukuthi metal indaba kuphela JIG. Bayanda kukhona amamodeli we amapulasitiki, inhlanganisela futhi Alloys ahlukahlukene oluyinhlanganisela.
Ngokuvamile umzimba JIG luhlanganisa ingwegwe, kodwa ezivamile futhi ezahlukeneyo lapho izakhi ezimbili kunikezwe ngqo. Ezimweni eziningi, izingwegwe futhi sinkers ayatholakala kwimisebenzi ehlukile. Iningi onobuhle izinga ayanikezelwa ngezingwegwe kusuka abakhiqizi phezulu. Ngakho-ke, ukukhetha okufanele uwucabangele uthi izinga ichopho, okuyinto ifakwe nenduku yokudoba. Jig esimweni enhle has cishe ngeke kuphele onqenqemeni - okungenani, asikwazi umbonile ngokusebenzisa khulu. Uma kukhona ngisho onokuqundeka okuncane, ukuthengwa ke kufanele uyekwe. Phakathi iphethini engajwayelekile ukuhlinzeka JIG enikeziwe ngezingwegwe ezine, kanye onobuhle esasinenjini ithiphu, lapho omiswe indandatho.
Indlela yokwenza JIG?
Nakuba emakethe kwezimpahla ukudoba phezu ayegcwele ezihlukahlukene ongakhetha JIG, Ongoti lo msebenzi kweqiniso uthanda ukwenza izinto ngezandla. Imishini esetshenziswa JIG ezenziwe ngesandla simiswe ngalendlela lelandzelako:
pellet Lead mass elikhulu begwazwa ngosungulo.
Ngesinye ekupheleni yenaliti ufakwa imbobo noma ucezu wire. Ngokulandelayo, ngenkathi ebambe ifakwe isici preform roll ukuze kolunye uhlangothi atholwe Isigaxa ukuma. Kuye luhlobo luni lwenhlanzi ohlela ukubamba e ukudoba ngenela, sinkers ukuma kungaba round, okusaqanda, nokunye. D.
Uma kudingeka, ebusweni kungenzeka waphetha sinkers esizayo ngokusebenzisa ugingqe efanayo phezu enamathela kanzima.
Ekugcineni mkhulu ka workpiece kwenziwa ngaphansi imbobo umugqa.
Hook ingasetshenziswa njengelungu uhlanganyela, kuyoba lula senqubo yokukhiqiza. Kulokhu kuyoba ezanele ukwenza umgodi ukuze iringi elihlangana lapho eminye unamathisele hook.
Catch ngokudoba ebusika ngenela
Ebusika, the JIG ngokuvamile esetshenziselwa ekubambeni walleye futhi perch e imithombo. Ngenxa yalezi zinjongo isicelo ngempumelelo ezithunyelwa abobunjwa angajwayelekile, kuhlanganise side. Jig olubi phansi, ukuze ngokushaya umzimba, uchungechunge sinkers phansi. Ukungazikhohlwa ukuthi JIG - ke kuyindlela yokuthola edonsa inhlanzi, kulandele pick it up kusuka phansi ukudala umphumela esiphezulu we "umdlalo". Kulokhu, kuyanda kufanele kube encane -. 50-60 cm ngokwanele ukwenza lokhu zokukhwabanisa kufanele kube izikhathi 5-6, Ngokuqhubeka ukubamba. Ngo parallel JIG ukulawula kuyadingeka ukwenza sigqoka. Ikakhulukazi, ngoba perch elifanayo kuyoba nenzuzo crank fed izingxenye ezincane.
Ukudoba JIG ehlobo
Nakuba ekuqaleni JIG wakhulelwa kuphela njengendlela yokuthola ekubambeni ebusika, eyagcina futhi zako njengoba indlela ukudoba ehlobo. Ngaphezu kwalokho, kule uhla efudumele olungafani izinhlanzi target nomumo we Sinker. Kulesi ukudoba JIG ehlobo kungaba kwenziwe kokubili kusuka ogwini futhi osesikebheni, futhi njengoba izinduku kufanele uthanda ukuphotha. Umsebenzi we-Umdobi ayiguquki - ukuhlinzeka "umdlalo" lolo ukuyengela izinhlanzi. endaweni Ukusebenza ehlobo kungaba ubuso ngayo. Okuningi ngokunembile, ukucwilisa futhi izinsimbi wenziwa esikhungweni ukujula engajulile -. Nokho, 25-30 cm, asikabi khona ukudoba kwamanye amazinga, kodwa kubalulekile ukukhumbula ukuthi lapho ezikhulayo izimila obukhulu, okungaba kwesithiyo.
Izici ekubambeni carp
Kusukela umbono ukudoba ngokudoba carp ngenela muhle ngoba esabela lolo, okuyinto Hambisa ngokuqondile. Ukwenza kwakhe kukhethwe izimpahla ezincane nge oblong ukuma side. Imibala kufanele uthanda amnyama. JIG kahle ku carp ehlobo - kungcono black tungsten Sinker abuzange ezingaphezu kuka 6 mm ubude. Kufanele Thenga kakhulu ikhanda ebucayi, bakwazi ukuwuphula ngaphansi lolo lula. Uma unezinkinga asakazwe olunembile, lokho akusho ubuhlungu ukwengeza enye mormyshke Sinker ukubeka it is Kuhlehliswe ngo-50 cm njengesisekelo carp ukudla okuhlukahlukene ingasetshenziswa izimpethu noma bloodworm futhi yokufakelwa -. Pieces Foam. Kunoma ikuphi kubalulekile ukukhumbula ukuthi carp ikakhulu iphendula ukuma, hhayi umbala. Ngakho-ke, linga ngamasu ahlukahlukene ngenhloso imibala ehlukene akuzona njengoba isikhiqiza njengensimu ubunjalo "umdlalo" kanye ngalé kwezindaba lolo emanzini.
Grayling ehlobo phezu JIG ngokuvamile ibanjwe ukhonkolo eside. Lovers zisebenzisa yamabhola antantayo kufanele sokulungiselela kusengaphambili lolo sisindvo. Kodwa ungaxoxa ngaphandle iflothi - kulesi simo inqubo yokudoba iyafana inqubo phansi. Maphakathi no-ihlobo amanzi kuba esobala, nezinhlanzi iqala ngenkuthalo ukuzingela izinambuzane. Ngalesi sikhathi kungcono umphelelisi JIG nayo, yizimpukane yokufakelwa ngoba Grayling. Kunconywa ukusebenzisa imibala ebomvu, ophuzi kanye grey. Lapho ukhetha ukujula, kufanele ugxile Grayling kakhulu. Uma phezu kukhona iminonjana Ukuvutha, catch kahle ezingqimbeni eliphezulu. Kwezinye izimo, kufanele akhethe Agasti ezingeni isilinganiso ngokucwiliswa. Ngu ekwindla Grayling uhlala cishe ezansi, kodwa JIG esetshenziswa ngalesi sikhathi zilungele ayisekho - umphumela uyoba, kodwa ngeke kuqhathaniswe nge izindlela zokudoba okunye.
Ukudoba usebenzisa JIG ingenye yezinto ezithakazelisa kakhulu futhi kujabulise. Hunt enkulu izilwane ezidla ezinye amasu anjalo kuyize, kepha catch izinhlanzi enhle ezingavamile kungenzeka. Ngokwesibonelo, JIG ngoba imvume yokudoba Grayling ukuqhuba le nhlanzi ebusika nehlobo. Into esemqoka - ukunquma ngemibala futhi ulawule uhlamvu "umdlalo" lolo. Ngaphezu kwalokho, ukudoba JIG nge ithuba elikhulu ngobuciko ngokwabo abadobi, abangakwazi uzizamele imibala, izinto kanye namafomu, okuyinto oyokwenziwa JIG. Lokhu kuyiqiniso ikakhulukazi abalandeli ukudoba ebusika iqhwa, yona evame ukuqonda isici nentshisekelo izinhlanzi ezansi.
Wathungela amigurumi teddy bear. Amigurumi Izici futhi isimiso ukusebenza
Ubuhlungu Emuva - inkinga ngayinye
Ama-analog of "Moxifloxacin", ukuqhathanisa nokubuyekezwa kwawo
Hofitol ngesikhathi sokukhulelwa
Cat sisitshela ngokusondelana okwakuphakathi kakhulu. Okufanele ukwenze kanye nendlela kahle ukunakekela izinwele zakho?